संसारभरीका सबै मानिस शाकाहारी भए के होला ? यस्ता छन् ९ असर – Gaule Media ::
Home/अन्य/संसारभरीका सबै मानिस शाकाहारी भए के होला ? यस्ता छन् ९ असर
ramsharan२१ कार्तिक २०७४, मंगलवार ०४:५८
मासुको खपत नहुँदा मुटु रोग, मधुमेह, स्ट्रोक र कुनै प्रकारको क्यान्सरको आशंका हुँदैन । यस्तोमा संसारभरीका दुई वा तीन प्रतिशत जीडीपी जुन मेडिकल बिलमा खर्च हुन्छ त्यो बच्नेछ ।
तर पोषणका केही विकल्प नतोकी मासुलाई हटाउनु हुँदैन । एक अनुमानका अनुसार संसारभरीका दुई अर्ब मानिसहरु कुपोषित छन् ।